မိန်ရာသီခွင်လေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသက်မွေးလုပ်ငန်းများ - Lifestyle Myanmar
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဇာတာခွင်က ဘယ်အရာဟာ မိန်ရာသီဖွားလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်လို့ ပြောသလဲ?
မိန်ရာသီဖွားတွေဟာ နေ့တိုင်းသွားလာရခြင်းကို နှစ်သက်ကြတာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ရချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်လေ့လာခဲ့တဲ့ /စိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့တဲ့ Career တစ်ခုကို လေ့လာလိုက်စားရမှာ တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ရာသီခွင်သင်္ကေတနှင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် အောက်ပါအလုပ်တွေထဲက တစ်ခုကို စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
နက္ခတ်ဗေဒင်အရ မိန်ရာသီဖွားတွေအတွက် ဘယ်အလုပ်တွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲ?
သင့်ရဲ့ Sun or Midheaven ဟာ မိန်ရာသီခွင်ထဲမှာဆိုရင် ဖန်တီးမှုဘက်ကိုသွားတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လိုချင်ပါလိမ့်မယ်။ မိန်ရာသီခွင်တွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉မှ မတ်လ ၂၀အတွင်း မွေးဖွားသူများဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ အလိုက်အထိုက်နေတတ်၊ ဂရုစိုက်တတ်၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ စရိုက်များရှိပါတယ်။
မိန်ရာသီတွေဟာ အဖိနှိပ်ခံတွေဖြစ်လို့ အကင်းပါးသောစွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
မိန်ရာသီနိမိတ်လက္ခဏာက အခြေအနေတွေမှာ အရည်ပျော်နိုင်ပြီး သနားကြင်နာခြင်းက သူတို့အတွက် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်အတွက်ဆိုရင် မိန်ရာသီခွင်တွေဟာ အမြဲတမ်း သာမန်ထက်အာရုံစိုက်တတ်ကြပေမယ့် အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ လုပ်ရမယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်ရာသီတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုက သူအလုပ်လုပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှာ အောင်မြင်မှု နှောင့်နှေးတဲ့ သဘောမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို အပြည့်အဝအသုံးချဖို့ ကိုယ့်ရာသီခွင်နှင့် အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်ကို ရှာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ မိန်ရာသီဖွားတွေအနေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်၊ ဖန်တီးခွင့်ပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုရှာပါ။ သင်ဟာ အလွယ်တကူ အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ အလုပ်လိုအပ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို သနားခြင်း၊ ဂရုဏာထားခြင်းကို ဖော်ပြခွင့်ပြုတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို သင်ရှာတွေ့တဲ့အခါ သင့်ဟာ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ နေရာမှာ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ဇာတာခွင်နဲ့ နက္ခတ်ဗေဒင်အရ မိန်ရာသီခွင်တွေအတွက် ဘယ်အလုပ်တွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းက မိန်ရာသီတွေအတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုအဖြစ် ဘာ့ကြောင့် ကောင်းတာလဲ?
မိန်ရာသီတွေမှာ အရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မှာ လိုအပ်တဲ့ နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ကာစတန်မာတစ်ယောက်အဖြစ် သူတို့ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို လမ်းညွှန်ပေးတာမျိုး၊ သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကူညီပေးတာမျိုးတွေကြောင့် လူတွေက သင့်လိုရှင်းပြချင်တဲ့သူကို ကျေးဇူးတွေတင်ပြီး အားကိုးကြပါလိမ့်မယ်။
၂။ marketing associate
ဒီအလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းက ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သင်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အတူ သင့်ရဲ့ creative bone ပေါ် မှာ လုပ်ဆောင်စေနိုင်တာကြောင့် မိန်ရာသီဖွားတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။ မားကတ်တင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် သင်မှာ တီထွင်ဖန်တီးမှု စွမ်းရည်တွေကတဆင့် ကုမ္ပဏီရဲ့ ပုံရိပ်ကို တိုးတတ်ကြီးပွားအောင် ကူညီနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ဒီအလုပ်က အခြားသူတွေနဲ့ သင့်ရဲ့စာနာနိုင်စွမ်းကို ပြသရမှာဖြစ်ပြီး အရိပ်လွှမ်းမိုးမှုမရှိဘဲ သင့်ရဲ့ပါစင်နယ်ဘဝနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်းမှာပါဝင်တဲ့ အချို့တာဝန်တွေက အင်တာဗျူးဖြေသူတွေကို စိစစ်ခြင်း၊အလုပ်သမားတွေရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အလုပ်ခန့်ဖို့ အကြံပေးချက်တွေ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ခန့်ခွဲပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။
ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းက ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ရဲ့ သင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ဝင်စားစေဖို့နှင့်အတူ လေ့လာလိုသူတွေကို ကူညီနိုင်စွမ်းပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် ကျန်းမာရေးပညာပေးသူ၊ အစိုးရကျောင်းဆရာ (သို့) GED educator စတဲ့ သင့်ရဲ့ အခြေခံပါစင်နယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်မျိုးစုံရှိပါတယ်။
ဒီအလုပ်မှာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ကြုံနေရစဉ် မိန်ရာသီတွေကို အာရုံစူးစိုက်စေမယ့် structure ကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကို အသုံးချခြင်းဖြင့် လူနာတွေကို စောင့်ရှောက်မှုပေးခြင်း၊ သူနာပြုတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေကို support လုပ်ပေးခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ စမ်းသပ်မှုတွေကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းအတွက် perfect ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ HR Assistant
နားထောင်ပေးရတဲ့ ဒီသက်မွေးအလုပ်အကိုင်က မိန်ရာသီဖွားတစ်ယောက်အတွက် အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်။ အလုပ်နမူနာတွေကို စီမံခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းအသစ်တွေကို အလုပ်ခွင်နဲ့ အသားကျအောင် ၊ လွယ်ကူချောမွေ့အောင်ကူညီခြင်း၊ သင့်ဌာနမှ တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အလုပ်ပဋိပက္ခတွေကို ဖျန်ဖြေပေးခြင်းက သင့်အတွက် လွယ်ကူသင့်ပါတယ်။
အချိန်နှင့် အားစိုက်ထုတ်မှု အလုံအလောက်ရရင် ဘယ်သူမဆို ဂီတပညာရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဒါက သင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ ကိုက်ညီဖို့ ပြောင်းလဲခိုက်မှာ သင့်ရဲ့ ဖန်တီးမှုကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ထုတ်ပြခွင့်ပေးပါတယ်။ သီချင်းရေးသားခြင်း၊ ရှိုးနှင့် ဂီတဗီဒီယိုတွေအတွက် အိုင်ဒီယာထုတ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ဝါသနာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၈။ Physical Therapist
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးက လူနာနဲ့ ကုသသူနှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ခက်ခဲသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လူနာအားသနားကြင်နာမှုရှိခြင်း၊ လူနာနဲ့အတူ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ခြင်းကို မိန်ရာသီတွေ မဆိုင်းမတွ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်၊ ချိုင်းထောက်တွေမပါဘဲ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်လေ့လာဖို့ သူတို့ကိုကူညီခြင်းအပြင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ လူနာလက်မလျှော့ရလေအောင် စည်းရုံးရတာက သင့်အတွက် မခက်ခဲလောက်ပါဘူး။